नयाँ दैनिक | सुरक्षा निकायको चुनौति विप्लव कि सरकार ? सुरक्षा निकायको चुनौति विप्लव कि सरकार ? – नयाँ दैनिक
सुरक्षा निकायको चुनौति विप्लव कि सरकार ?
जय किशोर पोद्दार (जेपि) comment 1
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र तथा नेपाली सेना आफैँमा देशका र जनताका सुरक्षाका लागि सञ्चालित सुरक्षा निकाय हुन् । त्यसमा कुनै दुईमत छैन र दुईमत हुनु पनि हुँदैन । यी तीनवटै निकायलाई अहिलेको अवस्थाले गम्भीर बनाएको पक्कै पनि सहि विश्लेषण हो । तर कसले बनायो ? भन्ने पनि गम्भीर प्रस्न छ।
एउटा स्वाधीन देश आज बिदेशीको कठपुतली हुन पुगेको छ। यसका कारक तत्वहरु के हुन् र को हुन् ? भन्ने विषयमा पनि अहिलेको सबै राजनीतिक घटनाक्रमको सहि अर्थमा व्याख्या गर्दै त्यति नै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
आज नेपालमा लोकतन्त्र आएको छ भन्ने आम जनसमुदायको बुझाई कुन हदसम्म सहि छ ? यदि साचिकै लोकतन्त्र आएको हो भने सुरक्षा निकायका यी तीनवटै अंगले वास्तविक देशद्रोहीमाथि आफ्ना कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि द्वन्द्वात्मक अध्ययन गरेर सहि ठाउँमा प्रहार भएमा देशमा विकास हुन वेर लाग्दैन ।
आज देशमा विप्लव नेकपामाथि जुन आरोप प्रत्यारोप लगाएर दमनको योजनाहरु बनाईंदैछन्, त्यो कहाँसम्म सहि र कहाँसम्म गलत छ ? भन्ने विषयमा ठन्डा दिमागले सोचौँ । यदि लोकतन्त्र आएको छ भने यी तीनवटै निकायले सरकारको निर्देशन मान्न जरुरी छैन ।
हो, देशमा अमनचैन, शान्ती स्थापना गर्नु नै तपाईंहरुको कर्तव्य हो । तर अशान्ति कसले मच्चाउदै छ ? देश विकासका बाधक को हुन् ? आज राज्यसत्ताको विरुद्धमा जनलहर किन बढेको छ ? यी अनेक प्रश्नहरुको जवाफ पहिले खोज्नु जरुरी छ ।
निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म, वाइडबडी घोटालाका भ्रष्टाचारी पत्ता नलागेसम्म, ३३ किलो सुनका तस्करहरुलाई कार्वाही नभएसम्म, श्रमिकले बाँच्न पुग्ने तलब नपाएसम्म, काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी नआएसम्म, धुँवा–धूलो नहटेसम्म, खाल्डाखुल्डी नपुरिएसम्म, सबैका घरमा चुलो बल्ने स्थिति नबनेसम्म, सुकुम्बासीले जग्गा नपाएसम्म, देशमा हुने गरेका दलाली र भ्रष्टाचारीहरुको पत्तासाफ नभएसम्म तपाईंहरुको शान्तिको अभियान कुनै हालतमा पूरा हुँदैन । केही समयका लागि जनआवाजहरु दबिएलान् तर दिर्घकालीन रुपमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन ।
यदि सहि अर्थमा लोकतन्त्र आएको हो भने विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध किन लगाईयो ? यसको कारण खोज्नु होला पहिले । किनभने आज विप्लवसँग रहेका कार्यकर्ताहरु पनि नेपाली जनता हुन् । देशको स्वाधिनता लुटिँदा पनि कहिले सम्म चुप लागेर बस्ने ? भनेर साथ दिने प्रगतिशीलहरुको जनसागर हो त्यो ।
हाम्रो अपेक्षा यति मात्र हो–लाखौँ लुटाएर करोडौं कमाउन कुर्सिमा पुगेकाहरुको निर्देशनमा हैन, प्रहरी प्रशासन तथा सुरक्षानिकायहरु आम जनसमुदायहरुको मनमा बस्न सक्नुपर्छ । देशको सुरक्षामा आम नेपाली युवाहरुलाई केन्द्रित हुन प्रेरित गराउने संस्थाको रुपमा संगठनलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।
आदरणीय सुरक्षा विभागका प्रमुख ज्यूहरु !
तपाईंहरुको प्रमाणपत्र पक्कै पनि भारत वा कुनै पनि देशले भेटी चढाएको प्रमाणपत्र हैन । फेरि पनि ती अनपढहरुले आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि तपाईहरुलाई प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा किन बुझ्नुहुन्न ? किन तिनीहरुले भनेका हरेक स्वार्थनिहीत निर्देशन मान्नुहुन्छ ? के साँचो अर्थमा देशका लागि लड्नेहरुलाई तिनीहरुले निर्देशन दिने हैसियत राख्छन् ? यसको मूल्यांकन किन गर्नुहुन्न ? तपाईंहरुले ति शासकको होइन, जनताको ‘नुन–पानी’ खानुभएको हो । देश तिनले होइन, हामीले विदेश आएर पसिना बगाएर पठाएको पैसाले चलाएको छ । हामीलाई विदेश आउन वाध्य पार्ने पनि तिनै शासकहरु हुन् ।
आज विप्लवलाई प्रतिबन्धित गर्दैमा देशको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आधार के छ ? आखिर किन जन्मिए विप्लवहरु ? पहिले त्यसको जवाफ खोज्नुपर्छ । यहाँहरुको लागी केही समस्याहरु त पक्कै जन्मेको होला विप्लवका कारण, तर किन जन्मियो ? जबसम्म यी सबै प्रस्नहरुको उत्तर खोजी हुँदैन सुरक्षा निकायबाट तबसम्म देशमा शान्तिको अपेक्षा कुनै अर्थमा पूरा हुँदैन ।
हो, अहिले बन्दुकले दबाउने कोसिस गर्नु होला माथिको निर्देशन भन्दै । तर दीर्घकालीन रुपमा यसलाई दबाउने सपना नदेख्नुहोला । भोलि फेरि अरु पनि विप्लवहरु जन्मिने छन् । इतिहासले सिकाएको पाठ पनि यही हो र सत्य पनि यहि हो ।
जुन जनलहर विप्लवको पक्षमा छ, ति सबै विप्लवकै योजनामा खटिएका छन् । ती सबै चिजलाई सामान्य लिनु पनि घातक हुनेछ । यो धम्की होइन, अनुरोध हो । इतिहासले सिकाएको र विज्ञानले पुष्टि गरेको यही हो ।
आज प्रतिशोधको राजनीति गर्नेहरुले पुनः देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने योजना बनाउँदैछन् । यो आफैँमा देशको स्वाधिनतामाथिको गम्भीर प्रस्न हो । देशलाई पुनः दशकौँ पछि पार्ने योजना हो । जनताको पिडामा महलम लगाउनबाट पन्छिएर विदेशी डलरको खेती गर्ने रणनीति हो, यसलाई तपाईंहरुले बुझ्नुभएकै होला ।
देशमा द्वन्द्व हुँदा ज्यान जाने भनेकै प्रहरी दाजुभाइ तथा आम जनताको हो, शासकको होइन । क्रान्तिका कारण बस्नै नसक्ने दिन आए युरोप, अमेरिका पुगेर ऐशआरामको जीवन जिउन पुग्नेगरी उनीहरुले सम्पत्ति थुपारीसकेका छन् ।
एनसेलको मुख्यालयमा विप्लवले नै किन बम पड्काउनुपर्ने ? न्यायलयले समेत कर तिर्नुपर्ने भनि सके पनि सरकार किन मुखदर्शक बन्यो ? वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोशन गुरुङको घरमा नै किन बम पड्काउनुपर्ने ? सरकारको काम के त ? यी सबै विषयको गहिराइमा जानुभयो भने आफैँ भेट्नुहुनेछ । सरकारले एनसेललाई कर नतिर्नुको कारण, गुरुङको अत्याचार र सरकारले केही गर्न नसक्नुको कारण सबै बुझेपछि तपाईंहरुलाई नै अचम्म लाग्नुपर्ने ।
प्रचण्डको असुरक्षाको कारण प्रतिबन्धित बनाईएको होला विप्लवलाई भन्ने पनि लागेको होला तपाईंहरुलाई । तर त्यो भ्रम मात्र सावित हुनेछ गहिराईमा गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो भने । प्रचण्डको जीवनी पढेपछि थाहा पाउनुहुन्छ यस्ता प्रोपोगान्डा गर्न कति माहिर छन् भन्ने । बादलको प्रतिसोधको राजनीति पनि स्पष्टसँग बुझ्न सक्नु हुनेछ गहिराईसम्म अध्ययन गर्नुभयो भने ।
सरकार अर्को नाटकियरुपमा वार्ताको कुरा गरि रहेको छ। देशमा भएका हत्याहिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचारका अपराधीहरुलाई एक महिनाभित्र कालकोठरीमा पुर्‍याइयोस्, जातिय–क्षेत्रीय–लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरियोस्, वर्गीय दमनको अन्त्य होस्, नातावाद–कृपावादको अन्त्य गरियोस् र अब कहिलै पनि त्यसता गतिविधिहरुलाई माफी दिईदैन भन्ने जनतासँग प्रण गरियोस् त्यसपछि विप्लवसँग वार्ता नै गर्नु पर्दैन । आफैँ सबै कुरा मिलेर जाने छन् । होइनभने जनतामा भ्रमको खेती किन ? विप्लवले वार्तामा बसेर अंश खोज्न शुरु गरेको क्रान्ति हैन यो ।
एउटा राजनीतिक माग र दुईतिहाईको बेथितिहरु विरुद्ध आवाज उठाउँदा हतियार बुझाउ भन्दै धरपकड तथा दमनको बाटो अबलम्बन गरिएको छ। विप्लवसँग बिद्यार्थी छन्, तिनहरुले कलम बुझाउनुपर्ने ? किसान छन्, हसिया– खुर्पा–कोदालो बुझाउनुपर्ने सरकारलाई? मजदुर छन्, बेल्चा–गैँची–हथौडा बुझाउनुपर्ने हो ? जनतामा भ्रम छरेर हुन्छ हतियार बुझाए बार्ता गर्छौ भनेर ?
जनता जागरुक भैसकेका छन् । एकातिर वार्ता र अर्कोतिर झुटा मुद्दा लगाउँदै निर्दोष हातहरुमा हत्कडी लगाउँदैमा क्रान्ती रोकिँदैन, अझ ज्वालामुखीझैँ बिस्पोट हुँदै जान्छ । दुईतिहाईको दम्भले सबैकुराको समाधन हुँदैन, नपत्याए इतिहास केलाएर हेरौ, बिश्वमा भएका आन्दोलनहरुबारे अध्ययन गरौँ । दमन र अत्याचारले विस्फोट नै गराको छ र गराउने छ त्यो झन् ठूलो चुनौति हुन सक्छ सुरक्षा निकायलाई । त्यसका लागि सुरक्षा निकायहरुले सहि र गलतको अध्ययन अनुसन्धान गरि सकारात्मक कदम चालुन्, अग्रिम शुभकामना छ । जनताले चाहेको शान्ति सहि रुपमा स्थापना गरुन्, शुभकामना छ ।
यी लेखकका नीजि विचार हुन् । उनी नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा कतारका महासचिव हुन् ।
One thought on “सुरक्षा निकायको चुनौति विप्लव कि सरकार ?”
dIpak oli says:
यक्दम जाहेज बिचार कम्रेड सलुट छ !!